eNasha.com - टिप्स दिने यो तरिका !
टिप्स दिने यो तरिका !
यसलाई गफ नसम्झनु होला, यो अमेरिकाको टेक्सस राज्यको सत्य घटनामा आधारित कथा हो ।
त यहाँ के भयो भने, मेलिना सालाजार एउटा रेष्टुराँमा काम गर्थिन् । त्यहाँ उनले सात वर्षकाम गरिन् । उनको अनुहारमा कहिले पनि विषाद्का रेखा देखिँदैनथे । उनी ग्राहकहरुका अघिल्तिर सधैँ मनोहर मुस्कानका साथ स्वागतका लागि तयार हुन्थिन् ।
उनले ग्राहकले चाहेजस्तै तात्तातो खाना ल्याइदिन्थिन् । चाहे ग्राहकले जस्तो सुकै मुखै पोल्ने तातो किन नभनोस्, उसले चाहेजस्तो सामग्री पस्कनु मेलिनाको विशेषता नै मानिन्थ्यो । उनको सदाबहार मुस्कानको त के कुरा गर्नु र ! उनलाई तारिफ गरे पनि गाली गरे पनि उनको मुस्कानमा एक रत्ति परिवर्तन हुन्थेन ।
उनी एक जनाको मात्र होइन, रेष्टुराँमा आउने हरेक व्यक्तिको उत्तिकै ख्याल राख्थिन् । उनको यो कलाका एक वृद्ध पूजारी भएर निस्किए । ८९ वर्षीय वाल्टर बक र्स्वर्ड्स्ले सात वर्षयही मुस्कान उत्तिकै डटेर निस्किरहेको देखेर ज्यादै प्रभावित भए । कसैले शब्दले उनको सामर्थ्यको प्रशंसा गथ्र्यो त कसैले फूलहरु उपहार दिएर लोभ्याउने कोसिस गथ्र्यो । तर यी वृद्ध चाहिँ उनको मौन पुजारी थिए ।
ती बूढाको गएको जुलाईमा मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि उनले छाडेको इच्छापत्रमा मेलिनाका लागि ५० हजार डलर छाडेका रहेछन् । उनले भनेका छन्- "यो टिप्स चाहिँ प्यारी मेलिनाका लागि ! किनभने यत्रा वर्षरुमा म उनलाई तातो खानाका लागि अर्डर गर्थेँ, तिनले कहिले पनि हुँदैन, ढिला हुन्छ या यस्तै केही भनेर टार्ने कोसिस गरिनन् ।" यो ५० हजार डलरसँगै उनलाई एउटा गतिलो २००० मोडलको 'बुक' कार पनि छोडेका छन् ।
"मलाई अझै पनि विश्वास लागिरहेको छैन", लुबीज् क्याफ्टेरियामा काम गर्ने मेलिनाले हार्लिजेन टेलिभिजनसँगको साक्षात्कारमा भनिन्- "यो त र्स्वर्ड्स्को ममाथि धारिलो तर मीठो प्रहार थियो !"
र्स्वर्ड्स्को मृत्यु जुलाईमा भएको भए पनि न त मेलिनालाई यसको खबर थियो न त घरका अन्य सदस्यहरुलाई । तर मेलिनालाई नयाँ वर्ष २००८ को शुभकामनास्वरुप ती बूढाले सात वर्षे लामो सेवाको 'टिप्स' छोडिदिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उदारता माया सुन्दरी सेलेब्रिटी भव्यता इन्टरनेट गुगल नग्नता मुद्दा मामिला बलिउड मूर्ख्याइँ विज्ञापन कीर्तिमान हलिउड फट्याइँ उपाय श्रीमानश्रीमती परिस्थिति उदेकलाग्दो प्रविधि